Ungayisebenzisa Kanjani i-Hiking Photography Nge-LucidPix - LucidPix
Njengoba amabhizinisi, izindawo zokudlela, nezinye izikhungo ziqala ukuvula kabusha imihlahlandlela eqinile yokuhamba emphakathini, izindlela eziningi zomphakathi zokuhamba izintaba namapaki wombuso ayaqhubeka nokwamukela izivakashi ngemuva kokuhlala zivulekile kuyo yonke indawo yokuhlala. Ukuhamba ngezinyawo, noma kungokujabulisa noma ukuzivocavoca, kuyindlela ephelele yokwelula imilenze yakho futhi uphinde uhlangane nezwe elingaphandle ngemuva kokuba uhlanganiswe ekhaya amasonto. Futhi iyiphi indlela engcono yokukhumbula ukubuyela kwakho emhlabeni ongaphandle kokuyithumba ngesithombe esihle? Kulesi sikhala sebhulogi, sizobe sixoxa ngamathiphu athile abalulekile wokuthwebula izithombe zezintaba ngeLucidPix 3D photos.
Ithiphu # 1: Thatha Izithombe Zokubuka izintaba Ngesikhathi sokusa noma kokuhlwa
Ngokushaya umkhondo ekuseni kakhulu ngaphambi kokuphuma kwelanga, noma ngaphambi kokushona kwelanga kusihlwa, uzokwazi ukuthwebula izithombe zakho ngokukhanyisa “ihora legolide”. Ukukhanya kwehora legolide kwenza izithombe zakho zibonakale zifudumele futhi zimeme kakhudlwana ngokusakaza ukukhanya okuthambile ngaphandle kwemithunzi eqinile ezithombeni zakho, kudala umehluko omuhle nobukhulu. Lezi yizici ezibaluleke kakhulu okufanele ube nazo lapho uqamba isithombe se-3D. Enye inzuzo yokudubula ngesikhathi sokusa noma kusihlwa ukuthi kuvame ukuba kube khona abahamba kancane kuleyo mzila kulezi zikhathi. Ngale ndlela, uzokwazi ukuba nenkululeko yokuthatha izithombe eziningi ngendlela oyifunayo, ngaphandle kwezixuku.
Ithiphu # 2: Gwema Ukuphazamisa Izizinda Ezintabeni Zakho Zokuhamba
Ezithombe zakho zokuhamba, intaba yakho ingalahleka kalula uma isizinda sakho simatasa kakhulu. Thola isizinda esinemibala eqinile noma yenza isihloko sakho sigqoke imibala ekhanyayo ukuze isihloko sakho siphume esithombeni. Ungase futhi ubeke isihloko sakho ngemibala ehambelana nesizinda sakho. Isibonelo, uma uhamba ngezinyawo ogwini, yenza isifundo sakho ukuthi sigqoke owolintshi, futhi uma uhamba ehlathini elihlala liluhlaza, yenza ukuba isihloko sakho sigqoke okubomvu. Lokhu kudala ukujula okungeziwe ezithombeni zakho ze-3D futhi kuhlukanisa ngokucacile imuva lakho nesizinda sakho.
Ithiphu # 3: Shintsha Ukubonaka Kokuhamba Kwezithombe Zakho
Dala ukubukwa okusha ezithombeni zakho ngokushintsha ama-engeli ezithombeni zakho. Esikhundleni sokuthatha izithombe kuzinga leso elijwayelekile, yehla phansi ukhombe ikhamera yakho phezulu ukuthola umbono omusha. Lokhu kusebenza kakhulu ngezifundo ezinde, njengezihlahla ze-conifer. Kunezindlela ezahlukahlukene zama-engeli nemibono ongayidubula kusuka ekudaleni ukujula okungeziwe kuzithombe zakho ze-3D. Sebenzisa lesi sithombe ukuphefumulelwa!
Ithiphu # 4: Khetha imizila enezici eziphawulekayo zokuthatha izithombe
Indlela engcono yokujabulela ukuhamba kwakho futhi uthole izithombe ezinhle njengomphumela ukuhamba ngezinyawo emzileni onezici ezihehayo. Khetha umkhondo oholela ekujuleni kwamanzi ngasese, ufake izihlahla ezinde ezibomvu zokhuni lapho, noma ophela ngombono omuhle. Uma uhlala endaweni yaseSan Francisco Bay Area, hlola eyethu TikTok ngezansi kweminye yemizila yethu eyintandokazi yokuhamba ngezinyawo eBay Area!
#bayarea #hikingtrails #bayareacheck #i-San Francisco #oakland #bayareatiktok #bayareathings #lucidpix # 3d #norcal # 3dphoto #goldengatebridge #ukuhamba
Songs Izingoma Zothando x Akekho Amaphoyisa Funk Mash Up - ldrethegiant
Landa i-LucidPix ye-Android or Landa i-iPhone futhi uqiniseke ukuthi wabelane ngezithombe zakho kumakhasi we-Facebook weLucidPix ukuthola ithuba lokufakwa eqenjini! Ungaba nabo Izithombe ezinhle kakhulu ze-LucidPix 3D, Izithombe zeLucidPix ze-3D ku-Facebook, noma elinye ikhasi leqembu le-3D Facebook!